Iingcebiso ezisi-7 ze-Ecommerce ngokuYila uMxholo oguqukayo | Martech Zone
Ngokwenza umxholo wabantu abafumana umdla kwaye kufanelekile, unokukhulisa ukubonakala kwesiza sakho kwiziphumo zophando zikaGoogle. Ukwenza oko kuya kunceda ukuseta ukutshintsha okuthile. Kodwa ukwenza abantu bajonge izinto zakho akuqinisekisi ukuba bathatha inyathelo kwaye bakunike uguquko. Landela ezi ngcebiso zisixhenxe ze-ecommerce zokwenza umxholo oguqukayo.
Yazi uMthengi wakho
Ukwenza umxholo oguqukayo kuyakufuneka ube nembono entle malunga nokuba umxhasi wakho unjani. Qala ngokuqokelela idatha yendawo yokuhlala yabantu abatyelele iphepha lakho, ubhalise kwii-imeyile zakho, kwaye bakulandele kumajelo asekuhlaleni. Sebenzisa uhlalutyo ukufumana idatha kubudala babo, isini, imfundo kunye nengeniso.
google Analytics banokukunika ulwazi malunga nezinto abanomdla kuzo xa bengena kwi-Intanethi. Ungasebenzisa i-Twitter Analytics kunye ne-Facebook Page Insights ukufumanisa ukuba abalandeli bakho beendaba zentlalo banjani. Cela ingxelo yomthengi malunga nemveliso yakho, zeziphi ezona mfuno zibalulekileyo, kwaye ungabanceda njani kwiingxaki zabo.
Nje ukuba uqokelele ingxelo eyaneleyo kunye nedatha yeedemokhrasi unokwenza umthengi abe ngumntu. I-persona yomthengi yimodeli yomthengi wakho ofanelekileyo, echaza ubunzima babo, izizathu, kunye nemithombo yolwazi. UDanny Najera, umthengisi wentengiso e UkubhalaUkuBhala.
Ifowuni yakho yokuSebenza
Phambi kokuba ubhale ukuba kubaluleke kakhulu CTA, Kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uyichaza njani inguquko. Zithini iinjongo zakho zeshishini? Ngaba ufuna ukuba abantu basebenzise isaphulelo? Joyina uluhlu lwakho lwe-imeyile? Ngenela ukhuphiswano?
Imveliso okanye inkonzo oyithengisayo iya kumisela i-CTA yakho. Nje ukuba ugqibe le njongo, ubeke isiseko seqhinga lakho lokuthengisa. UClifton Griffis, umbhali womxholo ovela Isenzi elula.
Nje ukuba ugqibe ekujongeni kubaphulaphuli bakho kwaye wenze umthengi abe ngumntu, ukulungele ukukhetha isihloko esifanelekileyo kumxholo wakho. Enye indlela elungileyo yokuza nezihloko ezomeleleyo kukuzibandakanya, okanye ubuncinci, ekuhlaleni, kwiindawo ezi-intanethi ezixoxa ngezihloko ezinxulumene nemveliso yakho.
I-Facebook, i-LinkedIn, iGoogle + kunye neReddit ziindawo ezilungileyo ukuqala ukuzijonga. Sebenzisa umsebenzi wokukhangela ukufumana imisonto exoxa ngemveliso oyithengisayo, kwaye ubone ukuba abantu bathetha ngantoni. Ukuqinisekisa ukuba isihloko siyathandwa, phanda ngaso I-Ahrefs Keyword Explorer okanye izixhobo ezifanayo.
Ixabiso leShishini lezihloko zakho
Kulungile ke kusenokwenzeka ukuba uludwelise uluhlu olude lweembono ezinesihloko, kodwa ungakhathazeki, siza kuyinciphisa. Lixesha lokunciphisa olo luhlu kwizihloko ezinokubakho ngokubhekisele kwixabiso lazo. I-CTA yakho iya kuba sisibane sakho esikhokelayo sokumisela ixabiso elinokuthi libekho kwishishini.
Hlela uluhlu lwakho ngokusekwe kubungakanani be-CTA yakho, emva koko uthathe izimvo eziphambili kwaye uzilahle eseleyo. Ungalibali ukuba i-CTA yakho kunye nomxholo kufuneka uchaneke ngokwegrama, uvavanywe, kwaye upolishwe ngokusebenzisa iinkonzo ezinje UKUbhala.
Ekugqibeleni lixesha lokwenza umxholo. Qala ngokwenza iGoogling, jonga ukuba loluphi uhlobo lomxholo oza ngesihloko osikhethileyo, kwaye uvavanye ukuba loluphi uhlobo lomxholo olusebenze ngcono. Iinkqubo ezinje nge Umhloli Wemixholo inokukunika ukuqonda okukhulu ukuba ngawaphi amanqaku akwisihloko sakho ekwabelwana ngaso rhoqo, kwaye kutheni zidumile.
Khumbula ukuba isihloko esithandekayo yinxalenye enkulu yento ezisa iibhola zamehlo ukujonga umxholo wakho, ke musa ukwenza isihloko sakho ukuba silandelwe. Hlanganisa kwezo ntliziyo zengqondo ukuze ubhale umxholo okhangayo.
Abantu benza izigqibo zokuthenga ngokusekwe kwindlela abavakalelwa ngayo, hayi indlela abacinga ngayo. Isincoko kwaye Bhala iphepha lam Yomibini le yimizekelo elungileyo yokusebenzisa umxholo oguqukayo ngempumelelo.
Apho ubeka khona umnxeba wakho kwizenzo
Ukufaka ii-CTA zakho kubalulekile, kwaye ewe, apho uzibeka khona zibaluleke kakhulu ngokubhekisele kuguquko lwakho. Isizathu sokuba abantu bacofe kwizinto ezinjengeekhonkco zakho kunye nee-CTA kukuba bazifumana kufanelekile. Ke musa ukuwanamathela naphina, okanye uzame ukudibanisa uninzi kangangoko unako ayisosicwangciso esiliqili.
Funda umxholo wakho kwaye ungeze kwi-CTA naphi na apho kubonakala kufanelekile kumxholo ekuxoxwa ngawo. Uzama ukukhokela abantu kwizinto zakho, ungababethi ngaphezulu kwentloko ngayo. Ungasebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zee-CTA. Bafake ngqo kwisicatshulwa sakho, kwii-popups ezinenjongo-yokuphuma, kunye nebar esecaleni yokuhamba kwesikhuselo.
Zazi iinjongo zakho kwaye ulinganise iziphumo
Yiba nenjongo, kwaye uqiniseke ukuba uyazi ukuba uyichaza njani impumelelo, kwaye yeyiphi imilinganiselo yakho yokuphumelela. Ngeke uyazi ukuba liphumelele kangakanani iqhinga lakho ukuba awulinganisi iziphumo zakho. Fumanisa ukuba umxholo wakho kwabelwana ngawo kangakanani, bangaphi abantu abawubonileyo, apho ukugcwala kwakho kuvela khona, kwaye uqhuba njani ngokuthelekisa abo ukhuphisana nabo.
Ukufumana ukugcwala ngakumbi kwendawo yakho ye-ecommerce ngesiqulatho esihle sinyathelo lokuqala. Kodwa asilinganisi impumelelo ngokumalunga nenani leendwendwe; Uguquko yeyona njongo yokwenyani. Umxholo olungileyo kufuneka ungenise abantu kwaye uphinde uguqule uguquko. Landela ezi ngcebiso zisixhenxe zokuhlala ukuze wandise uguquko lwakho!
tags: UkuThengiswa kweMpahlaguqukaukuguqula umxholoeCommerceUmxholo we-ecommerce
I-Adobe XD: Uyilo, iPrototype, kunye noKwabelana ngesisombululo se-UX / UI seAdobe